टोपबहादुरलाई कारबाही गर्छु भन्दै प्रचण्ड रन्किएपछि……. – YesKathmandu.com
आइतबार ०३, पुष २०७३
पार्टी नेता टोपबहादुर रायमाझी पार्टीको निर्णयविपरित गएको भन्दै उनी विरुद्ध रन्किएका छन । ‘उहाँहरु कन्स्टिट्युन्सी बचाउन जानुभएको हो, पार्टीको निर्णयभन्दा बाहिर कोही जान मिल्दैन । पार्टी नीति विपरित जोसुकैलाई पनि कारवाही हुन्छ ।
सविधान संशोधन विरोधमा ५ नम्बर प्रदेशका केही जिल्लाहरु र प्रमुख विपक्षी एमालेको आन्दोलनको कुनै तुक छैन, हिमाल, पहाड र तराई मिलाउन नै संशोधन प्रस्ताव आएको हो । उहाँहरु समझदारीमा आउनैपर्ने हुन्छ, यदि उहाँहरु निर्वाचनप्रति गम्भीर हुनुहुन्छ भने नमिल्नेखालको आन्दोलन छाडेर आउनैपर्दछ । नआएर सुखै छैन ।
चितवनको भरतपुरमा आयोजित नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले देशलाई फेरी सामन्तीतन्त्र ल्याउन कोशिश भईरहेको भन्दै सचेत रहन आग्रह समेत गरेका छन ।
सरकारले गरिरहेको कदमलाई मद्धत गर्नुपर्छ, गरिएन भने ठूलो राजनीतिक दुृर्घटनाको खतरा छ, त्यो दुर्घटनाले ४७ साल तिर त फर्कदैन ७४ साल तिरै जाने हो । दुई अंक चाही संयोग हो, संघीय गणतन्त्र उल्टाई पहिलेको सामन्तीतन्त्र ल्याउछौं भन्नु दिवासपना मात्र हो ।
यो देश एउटा कुनै जाति विशेष पेवा, उपल्लो वर्गको ठेकेदारी मात्रै होइन भन्दै सबै जातजाति, सँस्कृति धर्मको साझा देश भएको बताए ।
पहाडबाट मधेश छुट्टयाउने कसम खाँदै खाँदैनौं
देशलाई गरिबीको चक्रबाट बाहिर निकाल्न वाम गठबन्धन
एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकीकरण टर्दैन – नेता नेपाल
मैले गाँजा खाएर यसो भनेको थिइन नि !
यसरी जुर्‍यो प्रधानमन्त्री–प्रचण्ड वार्ताको साइत
गोरखाबाट संघीय संसदको चुनाव लड्नका लागि बाबुरामले तयारी थाले
देशभरीको स्थानीय निर्वाचनबाट कुन दल कुन स्थानमा ?
वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको सुरक्षा र सुविधाका बारेमा ध्यान दिनुपर्नेमा ओलीको जोड
उपसभामुखमा शिवमाया तुम्बाहाम्फे र पुष्पा भूसालबीच प्रतिस्पर्धा
सिलवाल किर्ते प्रकरणको अनुसन्धान गर्न प्रहरीद्वारा ५ सञ्चारमाध्यमलाई पत्राचार ,प्रेस चौतारीको घोर आपत्ति
प्रधानमन्त्री दाहाल र मोदीबीचको २५ बुँदे सहमति विरुद्ध नारायणकाजीसहित एमाले सडकमा उत्रदै
सहकारी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण
शंकर पोखरेल भन्छन: देउवा त ‘हुँदै हुन्न’,विकल्प नदिए वामदेवलाई उठाँउछौं